विचार – Page3– Halkaro
प्रकाशित मिति : २०७४, २० भाद्र मंगलवार September 16, 2017
बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्ति पछि यसबाट प्रभावित व्यक्तिहरुमा विभिन्न किसिमका मनोसामाजिक समस्या र यसका लक्षणहरु देखिन सक्छन् । जस्तै हातखुट्टा, जिउ काप्नु÷कट्कट् खानु वाझमझमाउनु, जिउ सिरिंग हुनु, मुख सुक्नु, पसिना आउनु, टाउको पेट दुख्नु, रिगंटा लाग्नु, मुटुको चाल बढ्नु, भोक तथा निन्द्रा नलाग्नु, शरिरमा अत्याधिक थकान लाग्नु, श्वास फेर्न गाह्रो हुनु, छाती भारी […]
राजपामा सैद्धान्तिक विचलन र तीव्र आकांक्षा
औपनिवेशिक पीडाबाट मुक्तिका लागि मधेशमा बारम्बार भएका आन्दोलनहरू स्खलित हुँदै गर्दा निरास भएका मधेशीजनको झिनो आशाको केन्द्रका रूपमा राष्ट्रिय जनता पार्टी समायोजन भएको छ । राजपाको सकारात्मक पक्ष के हो भने अर्धनग्न हुँदै गएका मधेशी राजनीतिज्ञ र निरास हुँदै गएका मधेशी जनतालाई नयाँ लेबल लगाएर नयाँ भरोसा दिलाएको छ । जसले औपनिवेशिक शासन अन्त हुँदा […]
जलवायू परिवर्तन, माटोको जगेर्ना
माटो हाम्रो जीवन पद्धति र जीविकासँग जोडिएको प्राकृतिक स्रोत हो । प्रकृतिमा एक अंगुल माटो बन्न चार सय वर्षभन्दा बढी समय लाग्दछ । यस्तो दुर्लभ र पुनर्नवीकरण गर्न धेरै समय लाग्ने माटो प्राकृतिक कारण वा मानव सिर्जित कारणबाट बगेर खेर गइरहेको छ । माटोविज्ञका अनुसार पृथ्वीमा ढुंगामाटोको निश्चित आयु हुने त्यसपछि आफै कुहिएर, छुट्टिएर पानी […]
१० महिनाअगाडि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्तारोहण गर्दै गर्दा एउटा प्रश्न उठेको थियो, ‘अब वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) के हुन्छ ?’ बुधबार सत्तारोहणको १० महिना बिताएर फर्किंदै गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो कार्यकालको सफलताको एउटा कडीका रूपमा यसलाई प्रस्तुत गरे । गत २९ […]
प्रिय नेता गण, नेता ज्यु, जितकाे ह्याङ्गअाेभरले छाेडेकाे त छैन हाेला तर, देशमा भैरहेकाे घटनाक्रमले केहि नलेखि बस्नै सकिन । हुन त अबिर जात्रा गरेर सकिसकेकाे पनि छैन हाेला । वल्लाे र पल्लाे टाेलबाट सम्मानका लागि बाेलावटहरु अाईनै रहेकाे हाेला । यसैबिचमा तिमिहरुकाे याे खुसीमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन नपाएका लाखौं परदेशी युवाहरुकाे तर्फबाट बधाई छ […]
स्थानीय तह निर्वाचनमा भोट कसलाई ?
प्रकाशित मिति : २०७४, २२ बैशाख शुक्रबार May 7, 2017
स्थानीय निर्बाचन नजिकिदै गर्दा साँच्चिकै आफ्नो ठाउँमा सृजनात्मक विकास भएको हेर्न चाहने हो भने नेता चयन गर्दा बढो ध्यान दिनुपर्छ । हुनत कुनै दलबाट उपयुक्त ब्यक्ति उमेद्वार बनेर आओस भन्ने आम नागरिकको चाहनाले कहिले काही काम गर्दैन । दलका ठुला नेतालाई विभिन्न प्रकारका प्रलोभन र प्रभावमा पारेर पनि कतिपयले उमेद्वारी लिएर आउछन् । उमेद्वारीमा परेकाहरुबाटै […]
किशोर थापा र रञ्जु दर्शनालार्इ खुलापत्र !
प्रकाशित मिति : २०७४, १६ बैशाख शनिबार
आदरणीय किशोर थापा तथा रन्जु दर्शनाज्यू , नमस्कार। सर्वप्रथम त काठमाडौंको मेयर पदमा अत्यन्तै उत्साहका साथ सुसंस्कृत राजनीति गर्न उमेद्वारी दिनुभएकोमा तपाईहरू दुबैलाई बधाइ छ। तपाइँहरूलाई सफलताको शुभकामना र नेपालमा सुसंस्कृत राजनीतिले सफलता पाओस र नेपाल स्थायित्व संगै विकासको बाटोमा शीघ्र आघि बढ्न सकोस् भन्ने चाहना राख्ने व्यक्ति भएकोले केही कुरा भन्न मन लाग्यो । […]
“बालकृष्ण ढुङ्गेललाई सात दिनभित्र पक्राउ गर्नु” भनेर अदालतले सरकारलाई दिएको निर्देशनको सन्दर्भलाई लिएर अहिले सञ्चारमाध्यमहरू तथा सामाजिक सञ्जालहरू रंगीचंगी भएका छन् । कतिले यसप्रति खुसी जाहेर गरेका छन् र कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् । कतिपयले यो प्रकरणलाई लिएर माओवादीलाई वदनाम गर्ने र आक्रोस पोख्ने माध्यम पनि बनाएका छन् । यथार्थतः ढुङ्गेल प्रकरण नयाँ होइन । […]
यतिबेर नेपालको माओवादी आन्दोलनभित्र सङ्गठन, नेता, कार्यकर्ता, पदोन्नति, योग्यता, क्षमताका साथै क्षेत्रीयतावाद, व्यक्तिवाद, गुटवाद, नातावाद तथा कृपावादका सन्दर्भहरू चर्चाको विषय बनेका छन् l क्रान्तिसम्बन्धी गम्भीर बहस ओझेलमा परेको र व्यक्तिवादी-अवसरवादी प्रवृत्ति हाबी हुन थालेको आजको अवस्थामा कुन समूहले के गर्यो, कुन समूहमा के भयो भन्दा पनि यहाँ सङ्गठन, योग्यता र पदोन्नति सम्बन्धी वैचारिक कुरा उठाउनु […]
मिल्नुस तर विधान ननिल्नुस !
नेपाल पत्रकार महासंघको विधान हेर्दा यो संस्था सातवटा उद्देश्यका लागि स्थापना भएको देखिन्छ । सबै बुँदाहरुमा पत्रकार र प्रेसको हित गर्ने भन्ने विषय केन्द्रमा छ । तर, जब नेपाल पत्रकार महासंघको जिल्ला तहका अधिवेशनहरु हुन थाल्छन्, यसमा चासो दिनेहरु पत्रकारमात्रै हुँदैनन् । त्यसमा समाजका सबै तह र तप्काको ध्यान तानिएको हुन्छ । र, पत्रकारहरु पनि […]